Job 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
16 Job wee zaa, sị: 2 “Anụwo m ọtụtụ ihe yiri ndị a.Unu niile bụ ndị nkasi obi na-eweta nsogbu!+ 3 Okwu na-enweghị isi ọ̀ na-agwụ agwụ?+Ka ọ̀ bụ gịnị na-ewute gị, nke mere i ji na-ekwu ihe ndị a? 4 Mụ onwe m nwekwara ike ikwu okwu otú unu si ekwu.A sị na mkpụrụ obi unu nọ n’ọnọdụ a mkpụrụ obi m nọ,M̀ ga-eji amamihe kwuo okwu megide unu,+M̀ ga-efufekwa isi megide unu?+ 5 M gaara eji okwu ọnụ m mee ka unu dị ike,+Okwu ngụgụ obi nke si n’egbugbere ọnụ m ga-ebelatakwa ihe mgbu unu—. 6 Ọ bụrụ na mụ ekwuo okwu, ihe mgbu m adịghị akwụsị,+Ọ bụrụkwa na mụ ekwughị okwu, gịnị ka ọ na-ewepụ m n’ahụ́? 7 Ma o mewo ka ike gwụ m;+O bibiwo ndị niile mụ na ha na-ezukọta. 8 I jichiwo m. Ọ ghọwokwa ihe akaebe,+Nke mere na ahụ́ m tara na-ebili imegide m. Ọ na-agba akaebe n’ihu m. 9 Iwe ya adọrisịwo m, o bukwaara m iwe n’obi.+Ọ na-ata ikikere ezé megide m.+Onye iro m asawo anya ya mmiri chebiri m.+ 10 Ha emeghepụwo ọnụ ha megide m,+Ha amawo m ụra iji kọchaa m,Ha agbakọtawo n’ìgwè megide m.+ 11 Chineke enyefewo m n’aka ụmụaka,O jikwa ike tụba m n’aka ndị ajọ omume.+ 12 M tụsaara ahụ́, ma o mere ka m kụja;+O jidere m n’ekwo wee kụrie m n’ala,O lekwasịwo m anya. 13 Ndị na-agbara ya ụta+ agbawo m gburugburu;Ọ gbapuwo m akụrụ,+ o nweghịkwa ọmịiko;Ọ wụpụwo ihe dị n’akpa ilu m n’ala. 14 Ọ na-etipusị m dị ka mgbidi;Ọ na-eji ọsọ abịakwasị m dị ka dike.+ 15 Adụkọtawo m ákwà iru uju+ wee jiri ya kpuchie akpụkpọ ahụ́ m,Asọwokwa m mpi m n’ájá.+ 16 Ihu m na-achazi ọbara ọbara n’ihi ákwá m na-akwa,+Oké ọchịchịrị agbachiwokwa mbubere anya m,+ 17 Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe ọjọọ dị n’ọbụ aka m,Ekpere m dịkwa ọcha.+ 18 Ala, ekpuchila ọbara m!+Ka ákwá m gharakwa inwe ebe ọ ga-akwụsị! 19 Ugbu a, lee! n’eluigwe ka onye na-agba akaebe banyere m nọ,Onye akaebe m nọkwa n’ebe dị n’elu.+ 20 Ndị enyi m bụ ọnụ na-ekwugide m;+Ọ bụ Chineke ka m lekwasịworo anya n’ehighị ụra.+ 21 A ga-ekpebi ikpe n’etiti mmadụ na Chineke,Dị ka e si ekpebi ikpe n’etiti mmadụ na ibe ya.+ 22 N’ihi na ọ bụ naanị afọ ole na ole fọrọ,Ọ bụkwa n’ụzọ m na-agaghị esi lọghachi ka m ga-esi pụọ.+